Shina, nisambotra mpanatontosa sarimihetsika namerina nibitsika sarinà tavoahangin-toaka miiresaka ny fandripahana tao Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Shina, nisambotra mpanatontosa sarimihetsika namerina nibitsika sarinà tavoahangin-toaka miiresaka ny fandripahana tao Tiananmen
Voadika ny 27 Mey 2019 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Ελληνικά, Deutsch, polski, Yorùbá, English
Tavoahanginà Baijiu ho fahatsiarovana ny fandripahana tao Tiananmen.
Jennifer Creery no nanoratra ny lahatsoratra niaingàna ary navoakan'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 24 May 2019. Ny dika natonta eto ambany dia naverin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Voalaza fa nosamborin'ireo manampahefana shinoa i Deng Chuanbin, mpamokatra sarimihetsika fanadihadiana, taorian'ny namerenany nibitsika ny sarinà tavoahangin-toaka iray mitondra ny anarana hoe “64” – entina milaza ny datin'andron’ny fandripahana teo amin'ny Kianja Tiananmen izay nitranga tamin'ny 4 Jona 1989.
Ilay fandripahana no namarana ny fihetsiketsehana naharitra volana maro nataon'ireo mpianatra tao Shina. Novinavinain'ny Vokovoko Mena tao Shina ho 2.700 ireo sivily maty tamin'izany, saingy manome tarehimarika ambony lavitra noho izany ireo loharano hafa. Hita tanaty antontan-taratasy tsiambaratelon'ny governemanta amerikàna tamin'ny 2014 ny tatitra hoe 10.454 ireo sivily maty voarakitra tanaty vinavina anatiny nataon'i Shina.
Tamin'ny 2016 no natao ny fanomezana endrika ilay tavoangin-toaka, mba ho fahatsiarovana ny faha-27 taonan'ny 4 Jona. Nantsoina hoe “8 wine 64″ ilay toaka. Mitovy fanonona amin'ny isa sivy ho an'ny teny Putonghua ny fanononana ny ‘wine’. Hita eo amin'ny sary amin'ny taratasin'ilay tavoahangy ny sarin'i “Tank Man” arahan'ny famaritana hoe “Aza adinoina mandrakizay, Aza Milavo Lefona”. Tsipihany ihany koa fa avy any Beijing ilay “wine” (divay), ary manana tahana alikaola 64% ary 27no nitahirizana azy.
Lehilahy shinoa efatra, Fu Hailu, Zhang Jinyong, Luo Fuyu sy Chen Bing, no voasambotra tamin'ny 2016 noho ilay resaka tavoahangin-taoka, voaheloka “ho mikotrika fandrodanana ny fahefam-panjakàna”.
Ny Aprily, ny fitsarana Chengdu Intermediate People no notsaraina ry Fu, Zhang sy Luo. Samy nomena sazy famonjàna telo taona avy ry zareo, niampy efatra hatramin'ny dimy taona sazy mihantona. Mbola voatazona hatramin'izao i Chen satria nolaviny ny filazana azy ho meloka.
Na eo aza ny say mihantona, mbola iharan'ny fanarahamaso hatrany ireo telo:
#ChengduWineBottleCase: Fu Hailu, Zhang Junyong & Luo Fuyu nopetahana vangovango elektronika taorian'ny nanomezana azy ireo famotsorana sy sazy mihantona, ahafahana manaraka ny toerana rehetra misy azy ireo, mandrakitra sary sy feo & misy SIM afaka mampita ny torohay rehetra, sary & video eo noho eo mankany amin'ny lohamilin'ny polisy.
Namerina nibitsika dia nosamborina
Mialoha ny fahatsiarovana ny faha-30 taonan'ny 4 Jona, i Deng Chuabin mpamokatra sarimihetsika no farany indrindra voasambotra noho ny resaka tavoahangin-toaka 64. Tao an-tranony tao Yibin i Deng no nosamborin'ny polisin'i Sichuan tamin'ny Zoma lasa teo, ora vitsy taorian'ny namerenany nibitsika tao amin'ny Twitter ny sarin'ilay tavoahangin-toaka 64, araka ny voalazan'ny Chinese Human Rights Defenders (CHRD) vovonan'ireo ONG mpiaro zon'olombelona. .
30 minitra monja taorian'ny namerenany nibitsika ilay sary, na dia nalaky toa inona aza ny namafàny ilay hafatra, dia naharay antso avy amin'ny polisy ilay mpamokatra sarimihetsika, hoy ny CHRD. Nogiazan'ny polisy ny finday telo, solosaina finday iray, solosaina fampiasa am-birao iray, iPad, karatra fitahirizana maromaro ary fankantsary nomerika tao an-tranony. Voalaza fa ao amin'ny Fonjan'i distrikan'ì Nanxi i Deng no tazonina noho ny “fikitikitihana fifandirana” – fiampangàna iray matetika atao amin'ireo mpanakiana ny governemanta.
Lazain'ny CHRD niverina nanao bemidina tany an-tranon'i Deng nandritra ny ora iray ny polisy, naka andianà fitaovana elektronika maromaro:
Fanavaozana momba an'i #Deng Chuabin: Ny 20 May 2019: nampanantsoin'ny polisy ao Peizhi ny rain'i Deng. Nisy lehilahy vitsivitsy nanaraka azy niverina tany an-trano ary naka sary sy lahatsary ny tao an-tranon-dry zareo. Nikaroka ny efitranon'i Deng Chuabin efa ho ora iray mahery ary nitondra fitaovana elektronika 20, isan'izany ny famahànana vatoaratra. Nentin-dry zareo hatramin'ny fitaovana fandrahoana vary (rice cooker) sy ny tariby mpitondra herinaratra. Ny 21 May, nilaza tamin'ireo ray aman-drenin'i Deng ny tao amin'ny paositry ny polisy mba tsy hampiasa mpisolovava amin'ny raharahan'i Deng.
Deng, fantatra ihany koa amin'ny hoe Huang Huang, dia mpamokatra sarimihetsika miasa ho an'ny tenany, miaraka miasa amin'ilay mpanakanto Ai Wiewei ao Beijing. Nolazainy fa talohan'izao izy dia efa niatrika fandrahonana nataon'ireo manampahefana, isan'izany ny fitazonana azy tamin'ny 2015 mba hanakanana azy tsy hanatrika seminera iray momba ny zon'olombelona natao tany Zeneva.
Ny volana manaraka io no manamarika ny faha-30 taona hatramin'ny nitrangan'ny fandripahana tao amin'ny Kianja Tiananmen. Isantaona, enjehin'ireo manampahefana ao Shina foana izay rehetra mitondra mankany amin'ny famoretana nialoha ilay fankalazàna, amin'ny fametrahana aminà toerana voaara-maso na any am-ponja ireo mpanohitra mahitsy fiteny.